स्रष्टा पदयात्राको २६औँ श्रृङ्खलाः पदयात्रा र साहित्य गोष्ठी – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, ८ पुस, विगत दुई वर्षदेखि जारी स्रष्टा पदयात्राले २६औँ श्रृङ्खला पुरा गरेको छ । हरेक महिनाको पहिलो शुक्रबार आयोजना हुँदै आएको पदयात्रा यो पटक भक्तपुरको साँगाबाट सुरु भएर काभ्रेको नाला पुगी समापन भएको हो ।
पदयात्रामा विभिन्न क्षेत्रका ११ स्रष्टाहरु सहभागी थिए । सहभागी स्रष्टाहरुमा अन्वेषक शीतल गिरी, कवि डिल्लीराज अर्याल, अनुसन्धाता डा. भक्त राई, प्राध्यापक, साहित्यकार डा. धनप्रसाद सुवेदी, कवि शशी थापा पण्डित, पत्रकार डिल्ली रमण सुवेदी, संगीतकार एन.बी. जनकपुरी, साहित्यकार बसन्त रिजाल, साहित्यकार, प्राध्यापक गोकुल पोख्रेल, चिनिया भाषा विज्ञ तथा पथप्रदर्शक कुबेर नेपाल र विद्यार्थी विक्रम श्रेष्ठ थिए ।
बिहान करिब ९ बजे साँगा पुगेका स्रष्टाहरुले विश्वकै अग्लो मानिएको शिवजीको मूर्ति र त्यहाँको परिवेशको अध्ययन तथा अवलोकन गरेका थिए । त्यसअघि साँगाको विशेष पहिचान बनेको तितौरा उद्योगको बारेमा स्थानीय विज्ञहरुसँग जानकारी लिएका थिए । करिब एक घण्टा अवलोकन र तस्विर संकलनपछि स्रष्टाहरु साँगा प्रहरी विद्यालयलाई दाहिने पारी साँगा भङ्गालमा रहेको लटरम्वेश्वर महादेव, संसारी माई, साँगा गढी हेर्दै अघि बढेको पदयात्री डा. भक्त राईले बताए ।
त्यहाँबाट ओरालो ओर्लिएर सडकै सडक लटरम्म फलेको सुन्तला र लप्सीमा रमाउँदै पदयात्रीहरु बाटोमा धेरै ठाउँमा लप्सीको परिकार,माडा बनाउँदै गरेको उद्योग अवलोकन गर्दै खड्का गाउँ मास्तीरको महादेवथान पनि अवलोकन गरी डाँडामा घमाइलो स्थानमा भोजन गरिएको अर्का पदयात्री कवि डिल्लीराज अर्यालले बताए ।
त्यसपछि पदयात्री स्रष्टाहरु नाला अमलडोल लगायतका स्थान हेर्दै नालामा रहेको प्रसिद्ध उग्रचण्डी भगवती स्थानमा पुगेका थिए । नाला उग्रचण्डी भगवतीको बारेमा ऐतिहासिकता तथा उत्तरपुर नालाको पौराणिक कथन बुझ्ने काम गरिएको अन्वेषक पदयात्री शीतल गिरी बताउँछन् । भगवती मन्दिरका चार जना पूजारी राजकुमार कर्माचार्य, कृष्णगोपाल कर्माचार्य, सिद्धिबहादुर कर्माचार्य र पूर्णगोपाल कर्माचार्य लगायत व्यक्तिसँग मन्दिरको ऐतिहासिकताका बारेमा सोधखोज र टिपोट गरिएको गिरीले बताए ।
मन्दिरका पूजारी, स्रष्टा पदयात्री र त्यहाँ आएका भक्तजनको रोहवरमा साहित्य गोष्ठी पनि गरिएको थियो । सो गोष्ठीमा स्रष्टाहरुले आ–आफ्ना रचनाहरु वाचन गरेर सुनाएका थिए । उग्रचण्डी भगवतीको भब्य दारु पूजा बिहीबार मात्रै सम्पन्न भएको स्थानीय पुजारी सिद्धिबहादुर कर्माचार्यले बताए । सो पूजाको प्रसाद हासको छोइला, बोकाको मासु, राँगाको मासु, बोडी, आलु, मुलाको विविध परिकार मन्दिर व्यवस्थापन समितिले स्रष्टाहरुलाई प्रदान गरेको थियो ।
ऐतिहासिक मन्दिर नाला भगवतीको बारेमा अध्ययन गर्ने र पूजारी सिद्धिबहादुरबाट पुस्तकसमेत उपलब्ध भएकोले अध्ययन थप व्यवस्थित बनेको कवि तथा पुरातत्व अध्येता शशी थापा पण्डितले बताइन् । चार भगवतीमध्ये एक प्रमुख भूगवती नाला भगवती भएकोले यसको महिमा उच्च रहेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय पूजारी कृष्ण गोपाल कर्माचार्यका अनुसार यहाँ वर्षमा ६ वटाभन्दा बढी विशेष पूजाहरु गर्ने गरिन्छ । नाला भगवतीका तीन मूर्तिहरुलाई ती विशेष अवसरमा मन्दिरमा राख्ने पनि गरिएको छ । नाला भगवतीमा हरेकपटक वलीसहितको पूजा गर्ने गरिएको छ । गुठी संस्थान काठमाडौँले उपलब्ध गराउने थोरै रकमले मन्दिरको पूजा सञ्चालनमा कठिन भइरहेको पूजारी कर्माचार्यले बताए । स्थानीयको सरसहयोग, स्थापित कोषले नै पूजा धानी रहेको तर यो धेरै समय टिक्न नसक्ने उनको भनाइ छ । भगवतीको पूजा व्यवस्थापनकोलागि सरकारले थप रकम विनियोजन गरिदिनु पर्ने उनको माग छ ।
प्रकाशित मिति: 2018-12-23 2018-12-24 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged नाला साँगा स्रष्टा पदयात्रा
दुई वर्ष दाम्लोमा अहिले खोरमा !
तिमी भयौ बुढी पिपल म त बुढो वर… (फोटोफिचर)
Tags: नाला, साँगा, स्रष्टा पदयात्रा